Waa Kuma aqoonyahan Engineer Cabdilaahi Xasan Camay? | Salaan Media
Waa Kuma aqoonyahan Engineer Cabdilaahi Xasan Camay?
Maqaalkani wax uu muwaadinka Somaliland daaha uga rogayaa, halyeeyadda Somaliland ay leedahay ee sida wayn uga qaybqaatay geeddi socodka hanaanka dimoqraadiyadda asxaabta faraha badan ee dalkeen ka curatay iyo nabadgalayada ka xasishay. Yaa ka mid ah haddaba halyeeyadda xooggoda, xoolahoogga iyo wakhtigooddaba qarankeena uu huray? Engineer, Cabdillaahi Xasan Amay waa haldoorka Somaliland ay leedahay ee muwaadin aad u baahan tahay inaad barto. Waa kuma hadaba Engineer Amay?
Eng. Abdillahi Hassan Amay, wuxuu wax barashadiisii hore ku soo qaatay magaalada Hargeisa. Waxbarashadiisii sare wuxuu ku dhamaystay Jaamacadii Lafoole ee Somalila. Wuxuu ka qaatay shahaadada B.Sc., isagoo ku takhasusay Physics iyo Mathematics. Wuxuu macallin ka noqday sideetanaadkii bilowgiisii dugsiga sare ee 26 June ee Hargeisa ku yaala isagoo Physics-ka ka dhigi jiray. Wuxuu u soo dhoofay dalka Saudi Arabia. Halkaas oo uu ku shaqeyn jiray ‘Administrator’, isagoo muddo 13 sanno ah ka shaqeynayay Saudi Royal Naval Forces (Baxriyada).
Wuxuu u soo wareegay carriga Ingiriiska. Wuxuu sii watay waxbarashadiisii sare. Halkaas oo ka qallin jabiyey Jaamacadda la yidhaa, North London University oo uu ka qaatay shahaadada Engineeriyada ee BEng-honours, isagoo ku takhasusay Electronic and Communications Engineering. Wuu sii watay waxbarashadiisii sare (Post graduate degree) oo uu ka qallin jabiyay Jaamacadda Queen Mary of London University isagoo ka qaatay shahaadada M.Sc., kuna takhasusay Biomedical Engineering.
Wuxuu ka soo shaqeeyay Kow iyo tobankii sanno ee u dambeeyay, dhakhtarada ku yaala London. Isagoo Barnet General Hospital ka soo shaqeeyay muddo shan sanno ah. Waxa kale oo uu ka soo shaqeeyey Siemens Healthcare iyo Philips Healthcare oo ah shirkado sameeya qalabka caafimaadka. Wuxuu saddexdii sannadood iyo badhkii u dambeeyay uu ka shaqaynayay walina ka shaqeeyaa, Croydon University Hospital, isagoo ku shaqeeya ‘Senior Biomedical Engineer’.
Eng. Amay waa aqoon yahan, waa macallin, waa Engineer, waa mufakir, waa siyaasi ruug cadaa ah. Waxaa intaa u dheer isaga oo ah nin aad u degan, dabeecad wanaagsan, diintana ku wanaagsan. Waxaan aqaanay muddo toban sanno ah oo aanu ka soo wada shaqeynay xisbiyada qaran ee Ucid iyo Waddani. Wuxuu kaalin mug leh ka soo qaatay oo uu aad uga dhex muuqday labadaa xisbi qaran. Waa nin u qalma inuu xil sare ka qabto waddanka Somaliland (I appeal to the altruism of likes of Engineer Amay to get back to Somaliland as our country is by far short of specialised skills)
Accademic in Social Science
Madaxweynuhu wuxuu furay bundad huudhaydh ah shaadh kii ku jirayna awdal buu siiyay